Yena | Fenat Apartments & Suite
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFerruccio
Amafulethi amkelekileyo kakhulu, adalwe ngokudibanisa isithethe saseAosta Valley kunye nezinto ezintsha. Ngoluhlu lwezilumkiso kwaye uxhotyiswe ngento eyimfuneko ukwenza ukuhlala kwakho kube ngaphezu kobumnandi. Indawo ekwilali ezolileyo ye-Introd icwangciswe ngobuchule, kuzo zonke iimfuno, ukusuka kwiihambo ukuya kwiindlela ezicela umngeni, imisebenzi yenkcubeko kunye nokutyibiliza ekhephini.
Ifulethi elihle elineendawo ezinkulu ezinikezelwe kwindawo yokuhlambela, apho kukho i-sauna enkulu ye-infrared yabantu abathathu, ishawa enkulu, ivumba lomthi eligquma ukusondelelana kokuhlala kwakho.
Umphezulu wendlu 52 sqm
Kwindawo entle, kwi-880 yeemitha ngaphezulu komphakamo wolwandle, i-Introd ifumana igama elithi "Interaquas", i-Entre Eaux ngesiFrentshi, kwindawo yayo phakathi kweDora di Rhêmes kunye nomsinga we-Savara. Idolophu eneneni imi kumlomo weNtlambo yeRhêmes kunye neValsavarenche, ezimbini kwiintlambo ezintathu zeValle d'Aosta eziyinxalenye yeGran Paradiso National Park.
Yidolophu yezolimo, eyayisakuba yi-fief ye-Sarriod barons, apho igcina inqaba ye-1260, eyalelwe nguPierre de Sarriod owathatha isihloko seNkosi yeNtshayelelo. Isakhiwo senziwe ngumzimba weendawo zokuhlala ze-polygonal-plan, embindini apho i-nucleus yasekuqaleni iphakama, equlethwe kwi-square-plan gcina.
Kufuphi nenqaba kufanelekile ukubona i-"L'Ola" yefama, isakhiwo sasemaphandleni samandulo ngamaplanga kunye ne-masonry ukusuka kwinkulungwane yeshumi elinesithandathu. Esi sakhiwo sathathwa njengomzekelo wokwakha xa kwakhiwa izikhululo zikaloliwe kwi-Aosta Valley.
Icawa yaseSan Paolo, ukusuka kwi-1500 kodwa yahlaziywa kumaxesha amva, igcina ubugcisa bokwenyani beBaroque kwisibingelelo esiphakamileyo kumthi oqingqiweyo.
E-Les Combes, iqhezu elincinane lalo masipala, uBawo Ongcwele uPopu uJohn Paul II wayedla ngokuchitha iiholide zakhe zasehlotyeni, isithethe esagcinwa iminyaka ethile lilandela lakhe uBenedict XVI. Imyuziyam enikezelwe kuPontiff isandula kusekwa kwisakhiwo esilungiswe ngokukodwa kumbindi wendlwana.
Kwilali yaseVilles-Dessus ungandwendwela ipaki yezilwanyana zasendle yamva nje, apho unokujonga imizekelo yezilwanyana eziqhelekileyo kwiiAlps, ezifakwe kwindawo yazo yendalo.
Ungaphoswa yiMaison Bruil, isakhiwo esisetyenziswa ngoku njengendawo yokubonisa, omnye weyona mizekelo mikhulu yezakhiwo zasemaphandleni kwiGran Paradiso.
Omnye umdla yibhulorho, eyakhiwa ngexesha leMfazwe yeHlabathi yokuQala kumsantsa ongaphezulu kweemitha ezingamashumi asibhozo ubunzulu, ubugcisa bokwenyani bokwakha.
Umbuki zindwendwe ngu- Ferruccio